यो मनभित्र यमन चेपाङ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
यो मनभित्र यमन चेपाङ
२०७० माघ २१, मंगलवार ०३:४६ गते
हात्तीवाङ, मझवाङ र बासवाङ– यी चितवनका पहाडी बस्ती हुन् । यी बस्तीमा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । अहिले त यी बस्तीहरु केही गुल्जार भएका छन् । हात्तीवाङ पर्यटकीय केन्द्र नै बनेको छ । मझवाङ पनि रमाइलै छ । सुन्छु, बासवाङमा पनि मोटरबाटो पुग्यो रे । यी अहिलेका कुरा भए, म साठीको दशक सुरू हुनुभन्दाअघिका यी बस्तीहरुको स्वरुप सम्झँदै छु । हात्तीवाङ पुग्न कम्तीमा पनि आठ घन्टा पैदल हिँड्नुपर्दथ्यो । मझवाङको उकालो छिचोल्न त अहिले पनि दुई घन्टाको जब्बर डाँडो उक्लनुपर्छ । वासवाङ पुग्न लोथर खोला सयौँ पटक तरेर १२ घन्टा लगातार हिँडेको हिड्यै गर्नुपर्दथ्यो ।
यस्ता दूरदराजका गाउँहरुमा बाहिरबाट पुग्ने कि शिक्षक हुन्थे या कहिलेकाहीँ आक्कलझुक्कल विकासे कार्यकर्ताहरु जान्थे । पछिल्लो समय क्रिश्चियन धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु पनि पुग्दा रहेछन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षले चरम रुप लिएको त्यो बेलामा दुवैतर्फका सेना भने प्रायः उक्लँदा रहेछन् । राजनीतिक कार्यकर्ताको आश्रयस्थल पनि हुने गर्दोरहेछ, त्यो ठाउँ । तर, त्यो बेला पत्रकारहरु सायदै लाग्ने गर्दथे त्यतातिर । न अहिलेका जस्ता मिडियाहरु थिए, न अहिलेको जस्तो जाँगर चलाउने मिडियाकर्मी नै । त्यसो त, त्यता जानुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा जगाइदिने पनि कोही थिएनन् ।
उत्प्रेरणा जगाइदिने पनि त कोही न कोही हुनुपर्छ । हो, म तिनैका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु । गएको बिहीबार एक जना व्यक्तिको निधन भयो, जसको खबरले मलाई धेरै नै चिमोटिरहेको छ । यमन चेपाङले बिहीबार यो संसार छाडे । यमन उनै हुन्, जसले रूखो–पाखोमा हिँड्नुपर्छ, आँटो–पिठो खानुपर्छ भन्ने भावना मनैभरि जगाइदिए । अनि, चिल्लो राजमार्गभन्दा उकालो र ओरालो गर्न सजिलो लाग्न थाल्यो । यमन त्यति ठूला मान्छे नहोलान्, जसको योगदानको चर्चा गरेर नथाकियोस् । तर, म जस्तो पत्रकारका लागि यस्ता पात्र हुन्, जसले यात्राको मोड नै बदलिदियो । मलाई लाग्दछ, उनी नभेटिएका भए म सायद यतै चिल्लो राजमार्गतिर बरालिरहेको पो हुन्थेँ कि ?
म सम्झन्छु ५७ सालको एउटा हिउँद, जुनबेला चेपाङ समुदायले भोगेका समस्याका बारेमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । जिविसको हल जहाँ अहिले पुस्तकालय राखिएको छ, हो त्यहाँ कार्यक्रम थियो । चितवन पोष्ट पत्रिकाका लागि समाचार संकलन गर्न म पुगेको थिएँ । त्यो बेला भेटिएका हुन्, यमन चेपाङ । जिल्ला प्रशासन, मालपोत र अन्य निकायबाट आएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई उनै यमनले चेपाङ समुदायका पिरमर्का राखेका हुन् । सोही कार्यक्रममा यमनले भने– ‘पुस्तौँदेखि बस्दै आएका पूरै बासवाङ गाउँमा कसैको लालपुर्जा छैन, दिनुप¥यो ।’
हैन लालपुर्जाविहीन गाउँ, ओहो चितवनमै यस्तो ? मनमा कुरा खेलिरह्यो । समस्या एउटा थिएन, अनेकौँ थिए । भोकमरी नलाग्ने चेपाङको घर भेट्टाउन मुस्किल छ भने उनले । लालपुर्जा मात्रै हो र, नागरिकता नपाएका चेपाङहरु त झन् कति हो कति ! अन्न होइन– गिठ्ठा, भ्याकुर, तरूलजस्ता कन्दमूल खाएर भोक मार्नेका कथा सुनाए उनले त्यहाँ । गिठ्ठा १२ घन्टा नपकाए खानै नसकिने हुन्छ रे । भ्याकुर मज्जाले पाकेन भने विष नै मर्दैन रे । ओहो, कस्तो दर्द भरिएको कथा हो यो ! यस्तो त कर्णालीमा मात्रै हुन्छ भन्ने चाल पाएको मैले आफ्नै जिल्लामा पनि होला भनेर कल्पनासम्म गरेको थिइनँ ।
चेपाङ समुदायका कुरा सुनेँ । सरकारी अधिकारीहरुका धारणा बुझेँ । कार्यक्रम सकियो, यमनसँग मैले गएर भनेँ– ‘हैन, बासवाङ कहाँ हो ? जानुप¥यो ।’ सायद, यमनलाई यो केटो जान्छ भन्नेमा विश्वास परेन क्या हो, उनले भने– निकै टाढा पो छ हो, दिनभर छिटोछिटो नहिँडे गाउँ पुग्नै सकिन्न ।
मैले भनेँ– ‘जानुप¥यो नि जति गाह्रो भए नि, आखिर आफ्नै जिल्ला त हो । पत्रकार भएपछि कम से कम आफ्नो जिल्ला त पूरै घुमौँ न ।’ ‘लौ, जाने भए समय मिलाउनू’ उनी पथ–पदर्शक बन्न तयार भए । तर, यसरी कुरा भएको लगभग पाँच वर्षपछि बल्ल बासवाङ गइयो । तर, यो बीचमा यताका धेरै पहाड छिचोलियो । यमनले उत्प्रेरणा जगाए भनियो नि, त्यो उत्प्रेरणा भनेको उनले सुनाएको कथा मात्रै हो । अनि, जानुपर्छ भनेर दिएको बोली मात्रै हो । आउने–जाने, खाने–बस्ने सारा प्रबन्ध मिलाएको भनेको होइन । हामी पहाड घुम्न जान्थ्यौँ । प्रायः एकल सिलवाल र सूर्यप्रकाश कँडेल कहिल्यै टुटेनन् । पहाडबाट झरेपछि यहाँ साथीहरु भन्थे– कसले लगेको, भत्ता कति आयो ? झोलामा चिउरा, दालमोठ हालेर हिँड्ने हामीहरु हाँस्थ्यौँ मात्र ।
चितवन पोष्टबाहेक राष्ट्रियस्तरको मिडियामा थिइनँ म । जिविसको कार्यक्रमपछि मैले एउटा रिपोर्ट तयार पारेँ । अनि हिमाल पाक्षिकमा पठाएँ । चेपाङले नागरिकता नपाएको बारेमा थियो, त्यो रिपोर्ट । हिमालले छाप्यो, ‘नागरिकताबिनाका नागरिक’ शीर्षक दिएर । वातावरण पत्रकार समूहले त्यो बेला ‘हाकाहाकी’ भन्ने पत्रिका निकाल्थ्यो । चेपाङ गाउँका कथाव्यथा सर्लक्क छाप्थ्यो, त्यो पत्रिकाले । ‘हैन, हिँड्न भनेपछि हुरूक्कै हुने’ चितवन पोष्टका सम्पादक धर्मराज अर्याल मलाई यसो भन्नुहुन्थ्यो । पहाड चढ्यो, चढ्नुभन्दाअघि यमनलाई सोध्यो– हैन, त्यतातिर केके विषयवस्तु छन् ? आएपछि देखे–सुनेको कुरा राख्यो– हैन, यस्तोे किन भयो भनेर उनै यमनलाई सोध्यो । सूचना दिने र सूचना पुष्टि गर्ने यमन नै हुन्थे ।
मेरो पत्रकारिता जीवनका ठूला सूचनादाता हुन्, यमन । मैले कलम चलाउने विषयका विज्ञ हुन्, यमन । संगत बढ्दै गयो, पत्रकारिताको माध्यमबाट जोडिन आएका राम्रा मित्र पनि हुन्, यमन । मलाई यमनको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनको धनसम्पत्ति आदिका बारेमा त्यति ठूलो ज्ञान छैन । तर, पत्रकारलाई चाहिने आफ्नो क्षेत्रका सबै कुरा दिन सक्ने पूर्ण मान्छे थिए, उनी । ‘हैन, बेसारखेतीका लागि ऋण दिने भनेर बैंकले त सारा चेपाङलाई नराम्ररी झुक्काएछ’ यसो भन्दै आउँथे यमन । हामी गाउँ गएर खोज्दथ्यौँ, बेसारखेतीका लागि ऋण लिएका चेपाङहरु नराम्ररी झुक्किएका रहेछन् । पाँच हजार दिएर ५० हजारमा सहीछाप गर्न लगाइएछ । सबैलाई थाहा छ, बेसार पहेँलो हुन्छ । तर, ऋणमा आएको बेसार सेतो पो हुँदोरहेछ । यस्तो ठगी ? हामी समाचार लेख्थ्यौँ ।
पछि सरकारले ३० हजारसम्म ऋण लिनेको सबै ऋण मिनाहा गर्ने भयो । हाम्रा समाचारका बलले यसो भयो भनेर म कदापि दाबी गर्दिनँ, तर समस्या बाहिर ल्याए सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने विश्वास चेपाङहरुमा अवश्य जाग्यो । यमनले के–के दिए, सबै यहाँ विस्तार लगाउन साध्य पनि छैन । तर जे दिए, आफ्नो समुदायको पीडालाई मिडियाले सार्वजनिक गरे सुन्नुपर्ने मान्छेको कानमा पुग्छ कि भन्ने विश्वासले दिए । उनको त्यो विश्वास सायद कायमै रह्यो होला भन्ने लाग्छ । किनकि, भेट हुँदा साह्रै आत्मीयताका साथ प्रस्तुत हुन्थे ।
पछिल्लो समय अलि ओझेलमा थिए, यमन । एक वर्षअघि भेट हुँदा मैले सोधेँ– ‘किन अचेल अलि कम देखिनुहुन्छ ?’ उनले ठट्टा गर्दै भनेँ– ‘हैन, अचेल चेपाङका लागि भनेर अरु जाति पनि हिँड्न थाले, म कति दगुरी राखौँ त !’ केही समयअघि सम्पन्न नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय अधिवेशनका बेलामा भरतपुरमा भेट भए उनी । त्यो बेला उनले खोले– ‘हैन सर, म त साह्रै थलिएँ । बिरामी पो छु त ।’ ओहो है, के भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले युरिक एसिडले सताएको बताए । बिरामी भए पनि उनको जोश र अनुहारको कान्ति कायमै थियो । जनजाति महासंघको सचिवमा उठ्ने बताए उनले । मैले शुभकामना दिएँ । उनी सोही पदमा निर्वाचित पनि भए ।
त्यसपछि यमनको र मेरो भेट भएन । फोनमा भने एक–दुई पटक कुरा भयो । एक दिन पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको कार्यालयमा दुई जना व्यक्तिहरु आए । उनीहरुको हातमा केही पत्रहरु थिए । उनीहरुले नै भने– यमन साह्रै बिरामी छन् । उपचार गर्ने पैसा भएन, सहयोग कसरी जुटाउने होला ? यमनको अवस्थाका बारेमा पत्रपत्रिकामा केही आए सहयोग जुटाउन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने आशय उहाँहरुको थियो ।
यमन उपचारका लागि काठमाडौँमा थिए । काठमाडौँबाट आएपछि उनी बस्ने लोथरमै भेट्न जाने भन्ने सल्लाहा भयो हाम्रो । तर, भेट्नुभन्दा अघि नै एकाएक उनको निधनको खबर आयो । पत्रकारलाई ठूलो गुन लगाएको एउटा पात्रले जीवनको अन्तिम समयमा पत्रकारबाट पाउन सक्ने कुनै सहयोग पाएन । यो अर्थमा म आफूलाई निकै स्वार्थी ठान्छु । यमनले दिएको जानकारी र हौसलाले मेरो पत्रकारिता जीवनमा ठूलो अर्थ राखेको छ । तर, मैले यमनलाई के दिन सकेँ त ? जीवनको अन्तिम समयमा भेट्न पनि गइनँ । ठूला गुन लगाएर गए यमन हामी बीचबाट, जसले मबाट हुन सक्ने समुदायको हितबाहेक आफ्नो भलो हुने कुनै उपाय चिताएन । भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली यमनलाई !